Homeसमाचारयस्तो रहेको छ आजको सुनको मुल्य, हेर्नुहोस्
December 20, 2020 admin समाचार 4631
नेपाली बजारमा आ’इतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । शुक्रबार ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज पनि सोही मूल्यमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसा’यी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी आज तेजा’वी सुनको मुल्य तोलाको ९३ हजार ८ सय ५० रुपैयामा कारोबार भएको जनाइ’एको छ । त्यस्तै आज आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १२ सय ८० रुपैँयामा का’रोबार भइ’रहेको महासंघले जनाएको छ ।-Osnepal बाट
February 4, 2021 admin समाचार 3700
अभिनेता दयाहागं राईले अहिले रमिता हेरेर बस्ने बेला नभएर सडकमा आउनुपर्ने बताएका छन् । उनले एउटा निरंकु’शलाई फालेर फेरी अर्को निरंकुश ब्यक्तिलाई राज्य सुम्पनु ग’लत भएको बताएका छन् । उनले त्यस्ता विरु’द्ध अब सडकमा उत्र’न
January 3, 2021 admin समाचार 4477
कलाको सि’माना हुँदैन । कुनै भूगोलको परिब’न्धमा पनि बाँधिन सक्दैन । न त कलाको जात र थर नै हुन्छ । कलाले जी’वन बोल्छ, प्रकृतिको अनुपम उप’हारलाई वर्णन गर्छ । जगतलाई सचेत गराउँछ । तर, समाजको
March 16, 2021 admin समाचार 2192
काउसुती बाट केहि समय अ’गाडी एउटा भिडियो प्रसारण गरियो जुन थियो पका’एको भातै छोडेर फरार भएकी थिइन् रेबिक उता रेबिका को श्रीमान बैदेशिक रोजगार को सि’लसिलामा शाउदी थिए र श्रीमतीले सम्पत्ति हिना मिना गरेको स’म्पत्ति
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205453)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196818)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196315)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196161)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194623)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194312)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192535)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192138)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184939)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161616)